Maalinta: Noofambar 11, 2018
TCDD 3. Dulsaarka weyn ee 'Atatürk Vagonu' ee Gobolka
Sannad-guurada 80 ee geeridii aasaasihii jamhuuriyadeena, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TCDD 3. “Atatürk Wagon bulunan, oo ku yaal gobolka oo uu adeegsado Gazi Mustafa Kemal Atatürk safarkiisa gudaha, waxaa si aad ah u adeegsada ardayda iyo muwaadiniinta. [More ...]
Xagaagan, ehelka Galatasaray ee la jeclaa Oguz Arda Sel, oo naftiisa ku waayey shil tareen oo ka dhacay Tekirdag, ayaa ardayda u soo bandhigay alaabada xilliga qaboobaha, kuwaas oo ay horay maktabad uga dhiseen degmada Keşan ee Edirne. Tareen ku yaal Tekirdag [More ...]
Xabaalaha Wagon ee ku yaala Köseköy
Qabuuro tareen oo ka kooban gaari taariikhi ah ayaa laga sameeyay Saldhigga Tareenka ee Kocaeli Köseköy. Markii la baabi'iyay tareennada maraakiibta, ayaa wadihii baabuurkii khasaaray iyo kuwa duugnaa ay halkan taagnaayeen sannado. Kama shaqeynin Xarunta Köseköy Station [More ...]
Maanta Taariikhda: 11 November 1961 State Railways First X
Maanta taariikhda 11 November 1961 Maareeyihii Guud ee ugu horreeyay ee Gobolka Tareenka Behiç Erkin wuxuu ku dhintey da'da 84. Intii lagu jiray Dagaalkii Qaranka, Kornayl Behiç (Erkin) Bey, oo ka soo dhaqaaqay Istanbul una dhaqaaqay Ankara, wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee Tareenka Gobolka. [More ...]